NCA-S EAO | Events List
20th PPST meeting
NCA-S EAO held the 20th PPST meeting in Chiang Mai, Thailand from 27th to 28th May 2018. General Saw Mutu Sae Poe delivered the Opening...
Comrade Than Khe says about the potential of holding Panglong Conference
Comrade Than Khe says that the holding of the third Panglong conference depends on the continuous discussion of the principle based issues in the next...
The Opening Remarks by General Saw Mutu Sae Poe at the 19th PPST Meeting
General Saw Mutu Sae Poe delivered the opening remark at the 19th PPST meeting which has been started on 9th May. The meeting takes two...
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရဲဘော်(ဦး)မျိုးဝင်းကို မေးမြန်းခဲ့သမျှ-
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ မအားလပ်နိုင်ဖြစ်နေကြတဲ့ NCA- S EAO (တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ) ခေါင်းဆောင်တွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရဲဘော်(ဦး)မျိုးဝင်း ကမာရွတ်၊ ရွှေလီလမ်းမှာရှိတဲ့ NCA-S EAO ရုံးကို ရောက်လာတာ တွေ့တာနဲ့ ကျွန်တော်သွားရောက်နှုတ်ဆက်ပြီး အများပြည်သူသိချင်နေကြတဲ့ တတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုငြိ်မ်းချမ်းရေးညီလာခံရွှေ့ဆိုင်းရတာတွေနဲ့ လက်ရှိ NCA-S EAO...
Multiparty youth group's visit to NCA-S EAO office
As one of the programs of Danish Institute for Parties and Democracy, the multiparty youth group for peace and enhancing the youth participating in the...
15th JMC-U Meeting
JMC-U Meeting held every two month
NRPC, Shwe Li Street, Kamayut Township, Yangon
(၁၄) ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေး (14th Union Peace Dialogue Joint Committee meeting) ကို ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၇) ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၂:၀၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်၊ အမျိုးသားပြန််လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနမှာ ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) နှင့်...
Shwe Li Street, Yangon
14th Union Peace Dialogue Joint Committee meeting
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန, Nay Pyi Taw
NCA-S EAO Security Sector Workshop to be held from October 19 to 21
The Workshop on Land and Natural Resources held through online video conference
Statement on the 5th Anniversary of the Nationwide Ceasefire Agreement